Ireo fandrosoana lehibe izay ho tonga hampiroborobo ny angovo azo havaozina | Green Renewable
Ireo fandrosoana lehibe izay ho entina hampiroboroboana ny angovo azo havaozina
Tomàs Bigordà | | Angovo azo havaozina, Teknolojia vaovao
Na dia ampifandraisinay amin'ny hevitra momba ny fisamborana sy ny fampiasana angovo avy amin'ny masoandro amin'ny tontolon'ny masoandro aza ny olombelona, ​​dia nanararaotra ity loharanon-kery ity ny olombelona hatramin'ny an'arivony taona lasa izay hanazavana sy hanafana ny tranonao, makà rano mafana dia andrahoy. Mikasika ny rivotra, ny fikosoham-bary ankehitriny dia fivoaran'ireo efa naseho tao amin'ny Don Quixote Cervantes.
Ny fandrosoana ara-teknolojia dia nanova ny herin'ny masoandro sy ny rivotra, ankoatry ny hafa, ho zavatra miha mahomby sy mora ampiasaina, saingy mbola lavitra ny lalana alohan'ny hahafahantsika manadino ny momba ny solika fôsily sy ny fampiasana azy fotsiny angovo hafa. Vondronà mpikaroka sy injeniera an-jatony eran'izao tontolo izao no miasa hanatsara ny fahombiazan'ireo angovo ireo, ary izany no sasany amin'ny hevitr'izy ireo.
2 2. Ranomainty Photovoltaic
3 3. Turbine rotoroa indroa
4 4. Panamasoandro mitsingevana
Ny sela masoandro miorina amin'ny silikika ankehitriny dia mijaly amin'ny fetra vitsivitsy: vita amin'ny fitaovana tsy dia fahita firy izy ireo Izy io dia hita amin'ny natiora amin'ny endrika madio sy ilaina hanaovana azy ireo, izy ireo dia henjana sy mavesatra ary voafetra ny fahombiazany ary sarotra ampitomboina. Ny fitaovana vaovao sasany, antsoina hoe perovskites, dia napetraka ho toy ny fandrosoana tsara indrindra hamahana ireo fetra ireo, noho ny iankinan'izy ireo amin'ny singa be dia be ary mora vidy satria afaka manana fahombiazana bebe kokoa izy ireo.
Perovskites dia a sokajy lehibe amin'ny fitaovana izay molekiola biolojika dia niforona tamin'ny alàlan'ny fatorana karbaona sy hidrogen miaraka amina metaly, toy ny firaka, ary ny halogen, toy ny klôro, ao anaty kristaly miendrika lattice. Afaka mahazo miaraka amin'izy ireo izy ireo fanamorana, mora vidy ary tsy misy gazy, miteraka sarimihetsika manify sy maivana azo ovaina amin'ny endriny rehetra, izay ahafahana manamboatra panneaux solaires amin'ny fomba tsotra sy mahomby ary miaraka amin'ny valiny azo ovaina ary mora apetraka.
Na izany aza, manana fatiantoka roa izy ireo: ny voalohany dia ny fahafahan'ny fampidirana azy ireo famokarana betsaka mbola tsy voaporofo io; ny iray hafa, izay ampiasain'izy ireo mandrava haingana dia haingana amin'ny toe-javatra tena izy.
2. Ranomainty Photovoltaic
Mba hamahana ireo drawbacks an'ny perovskites ireo, ekipa iray avy amin'ny US National Renewable Energy Laboratory dia namorona fomba vaovao hiatrehana azy ireo. Momba ny fanaovana 'ranomainty photovoltaic mamela azy ireo ho amin'ny fizotry ny famokarana mandeha ho azy.
Natomboka tamin'ny a pervoskite tena tsotra misy iode, firaka ary methylammonium. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ity fifangaroana ity dia mety hamorona kristaly mora foana, saingy maharitra elaela amin'ny maripana ambony vao mihamafy kokoa avy eo, izay hanemotra sy hahatonga ny fizotry ny famokarana lafo kokoa. Ka ny ekipa dia nitady ireo toe-javatra izay hanafainganana ny famoronana kristaly, izay nanolo ny fanoloana ny sasany tamin'ireo fitaovana niaraka tamin'ny fitambarana hafa, toy ny klôlôma, ary nanampy ilay nantsoin'izy ireo hoe "solvent négatif", zavatra handamina haingana ny vahaolana.
3. Turbine rotoroa indroa
Raha ny filazan'ny injeniera Anupam Sharma sy Hui Hu, avy ao amin'ny Iowa Energy Center, ny fototry ny mpamokatra rivotra dia manana olana roa lehibe izay mametra ny fahombiazany: ny iray, ireo dia faribolana lehibe tsy mamokatra angovo ho azy ireo, ary ny faharoa, izany dia izy ireo a fikorontanana amin'ny rivotra izay mampihena ny angovo misy ny generator ao aorian'izy ireo eo anelanelan'ny 8 sy 40% miankina amin'ny fepetra.
Ny vahaolana arosonao dia manampy rotor faharoa, kely kokoa, isaky ny turbine. Raha ny fanahafana azy ireo sy ny andrana notontosainy tao anaty tionelin'ny rivotra, dia nampitombo ny angovo vokarin'ny 18% ny lelany nanampy. Ny drafitra dia ny hampivelatra turbine miaraka rotor roa heny araka izay azo atao, mamaritra hoe aiza no toerana tsara indrindra hametrahana ny faharoa, ny tokony ho halehibeny, ny endrika tokony hisy ny fotony ary raha tokony hihodina amin'ny lalana mitovy amin'ilay rotor lehibe izy, na ny mifanohitra amin'izay fotsiny.
4. Panamasoandro mitsingevana
Nanomboka ny taona 2011 dia miasa hamorona ny orinasa frantsay Ciel & Terre panneaux solaire mitsingevana be. Ny rafitra misy azy, antsoina hoe Hydrelio Floating PV dia mamela napetraka eo ambonin'ny rano be ny takelaka mahazatra toy ny farihy, fitahirizana ary fantsakan-drano ho an'ny fanondrahana sy ny toy izany, ary koa tohodrano ho an'ny famokarana herinaratra photovoltaic. Izy io dia ny famoronana safidy tsotra sy mora amin'ny valan-javaboary amin'ny tany, indrindra ny fieritreretana ireo indostria mampiasa faritra be rano ary tsy mila miala izy ireo hanomezana azy ireo fampiasana bebe kokoa.
Raha ny filazan'ny orinasa dia mora mivondrona sy misintona izy ireo, azo ampifanarahana amin'ny fikirakirana herinaratra samihafa, azo ovaina ary tsy mila fitaovana na fitaovana mavesatra. Ny fampitaovana voalohany amin'ity karazana ity dia natsangana tany Angletera sy Japon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ireo fandrosoana lehibe izay ho entina hampiroboroboana ny angovo azo havaozina
Boom azo havaozina any Arzantina